Exhibition zvinhu - Suzhou Sohologistics CO., LTD.
Imba>Our Services>Chirongwa Chekushandisa>Ratidziro yezvinhu
Sohologistics ndeyechokwadi kuratidzwa kwekutakura nyanzvi. Isu tinotarisira kutakurwa kwezviratidziro nemidziyo kutenderera pasirese kune kuratidzira, kuratidzira kwounyanzvi, zviitiko uye tradeshows.
Nemakore anopfuura makumi maviri ekutsvaga uye kusimudzira, anopfuura zviuru gumi zvemhando yepamusoro ejensi yakatenderedza nyika dzinopfuura mazana maviri pasirese, Sohologistics inowana hunyanzvi hwekuratidzira mashandiro uye ruzivo rwekufambisa indasitiri ruzivo uye mukubatana kwepedyo nemakambani epasirose epasi rose nevamwe vanobatirana. zvinopa mabhizimusi ekunze uye ekunze, uye varatidziri vane hunyanzvi hwekurongedza, warehousing uye kutakurwa kwezviratidziro zvine chekuita nemasevhisi
Isu tinobvisa kunetsekana kwekuratidzira kutakura, magwaro eATA, Tsika dzechivanhu, Kuitisa ongororo yekusiya iwe wakasununguka kuti utarise pane zvimwe zvakakosha zvechiitiko chako.
Sohologistics Exhibition logistics services
Kupfupisa zvatinoita pakuratidzira, isu tinopa:
Iyo yakapusa, uye yakapusa nzira yekuhodha iyo dumba
Kuiswa uye Kubvarura
Pa-saiti yekushandura sevhisi
Pane-nguva kuburitswa kweMienzaniso Export
Pane-nguva kuendesa kune Zviratidziro Kunze
Kugadziriswa kwekufambisa kwezviitiko zveMitambo
Logistics kutakurwa kweArt
Logistics kutakurwa kweShows
Hunhu hweExphibition logistics
1. Nekuda kwekufamba kwenguva kwenzvimbo yemitambo uye horo yekuratidzira, traffic traffic nezvimwe zvinhu, zvakakosha pakuendesa-nguva, izvo zvinoreva kuti zvinhu hazvigone kusvika pamberi kana kunonoka.
Iyo yakaoma nguva-kutonga kune yega link uye zvakare yemunharaunda marongero uye mirau zvinodiwa nemitauro.
2. Zvinonyatsodikanwa pamagwaro ekunze uye ekisipoti. Zvekuratidzira zvigadzirwa, inowanzo gamuchira kwenguva pfupi kupinza uye kutumira kunze kuzivisa uye Ata magwaro kuzivisa.
3.Zvinonyatsodikanwa pakuiswa kwezvinhu. Akawanda Ekutakura makatoni anoda kushandiswa kuve nechokwadi chekutakura kwemakatoni, hunyoro-humbowo uye husina mvura uye zviri nyore kubvarura.
4. Zvinhu zvekushambadzira uye zvekushandisa zvinoshandiswa nevaratidziri zvinofanirwa kunge zvichitarisirwa chero kuongororwa, kunyoreswa uye marezinesi neChinese Tsika.
5. Zvinodiwa zvechiratidziro uye mashandiro ekupakira mamaki zvakanyatso kudiwa nerinotevera ruzivo senge: zita rekuratidzira, zita rekuratidzira, nhamba yekuratidzira, nhamba yepakeji uye huwandu hwakazara.
Operation Maitiro Ekuratidzira Logistics
1. Kusainwa kwechibvumirano chekufambisa
2. Kugadzira chirongwa chekufambisa
3. Kuronga nekupakata
4. Gwaro reATA
5. Kugadzira chirongwa cheboka
6. Kuzadzikiswa kwehurongwa hwekutakura
7. Kuona yekutevera mhinduro
8. Pa-saiti kutaurirana pamwe nekubatana